Uchungechunge lwe-2070 Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-Series 2070 Dragon® cutter dredge iyitayela lesimanje kakhulu le-20 ”dredge emhlabeni elifaka amasu wokuqamba odume umhlaba wonke ka-Ellicott. Lokhu ukubikwa okuphathekayo ingahanjiswa ngeloli ezindaweni ezimaphakathi nezwe futhi iyakwazi ukudonsa ize ifike ku-50 ′ (15 m) ivumela ubukhosi ukuthi busebenze eziteshini ezinkulu zokuhambisa. Isikebhe nendlu yensimbi yenzelwe i-Bureau of Veritas (BV) Imithetho Yamanzi Evikelwe futhi ngenxa yalokho leli dredge lilungele izicelo ezahlukahlukene kufaka phakathi ethekwini dredging, ukwehla komfula, ukubuyiselwa komhlaba, futhi izimayini zesihlabathi amaphrojekthi.
I-2070 DREDGE ADVANTAGES
Izinjini ezimbili ezihlukile ezisebenza ngokuzimela ukushayela ipompo nohlelo lwe-hydraulic. Lokhu kuvumela amandla aphelele wokubacindezela ku-cutter namawinji ngisho nalapho ama-RPM ancishisiwe epompa — into izinjini ezilodwa ezingakwazi ukuyenza.
Uhlelo lwe-hydraulic lwakhiwa ngokugxila ekusebenzeni kahle, okuholela ekusetshenzisweni okuphansi kwephethiloli nasekusebenzeni kwezinhlelo eziphakeme zokwehlisa amandla.
I-Main Engine Caterpillar Marine C-32: 1,300 HP (969 kW)
Injini Esizayo Injini C-15: 440 HP (328 kW)
I-valve yokusiza yokudonsa
I-Jib crane ngaphezulu kwepompo
Umlilo ophathekayo nepompo ye-bilge